प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ? – Nepal Press
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
२०७७ फागुन ११ गते १९:०८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेसँगै उद्योग व्यवसायीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठले सर्वोच्चले गरेको फैसला सकारात्मक भएको बताए । ‘कोभिड–१९ का कारण धरासायी बनेको उद्योगधन्दामा राजनैतिक अस्थिरताले अझ प्रभावित बनाइरहेको थियो । अब संसद पुनःस्थापना भएसँगै राजनीति स्थिर होला । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ’, उनले भने ।
यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने ‘यो फैसलासँगै नेपालको व्यापार व्यवसाय सजह हुनेछ । संसद पुनःस्थापना नभएको भए देशले धेरै नै आर्थिक भार बोक्नु पर्थ्याे। अब केही सहज होला,’ उनले भने ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोहरले सर्वोच्चको यो निर्णयले उद्योग व्यापारीलाई खुशी नै तुल्याएको बताए । ‘हामी उद्योगीले राजनैतिक कुरामा बोल्न मिल्दैन तर, सर्वोच्चको यो निर्णय ठीक छ’, उनले भने ।
संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिना लामो सुनुवाइपछि सबैलाई ‘सरप्राइज’ दिंदै अदालतले आजै आफ्नो फैसला सुनाएको हो ।
दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय फागुन ७ गते सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फैसला कुनै पनि दिन आउन सक्ने बताएका थिए । दुवै पक्षको बहस नोट फागुन १० गते पेश भएको थियो ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन ११ गते १९:०८